Ngwongwo Ngwongwo nke Copper, Crystal Chandeliers, Sinks Bathroom, Bowls Bowl
Ngwongwo Ngwá Egwuregwu Copper
Ngwá Ụlọ Ọcha Sichaa
Akpụcha Shiol Ejicha
Akwụkwọ Crystal Chandeliers
Okwute Okwute Okwute
Kpọọ anyị ugbu a + 20 100 222 4297
Enweghị ngwaahịa na ụgbọ ibu
Gaa zụọ ahịa
Ngwongwo Ngwá Egwuregwu CopperA na-ejikarị ọla kọpa n'ụlọ ọrụ ahụike, ebe nje virus, nje bacteria, na fungi na-achịkwa ma na-anọgide na-arụ ọrụ ọnụ ụzọ, nkedo, tebụl, teepu (tapcet) na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ. Copper egosiri na nje Antimicrobial anti contamination Copper na-egbu mgbe niile nje bacteria, ọ dịghị mgbe ọ na-apụ apụ, ọ dịkwa mma iji ya mee ihe dị ka ọla kọpa na-egbochi igbochi ntanetị. Ụmụ nje ndị a nwere ike ịdị ndụ n'elu oge ruo ogologo oge.
Akwụkwọ Crystal ChandeliersEbubo nkuku nkuku
Okwute Okwute Okwutekristal-sconces
Nkwonkwo Igwe Nkwado Spa Spa
Ngwongwo Egwuregwu Copper
Akpan ọkụ ọkụ ọkụ
Nkwụnye Laptọọpụ Copper
Akpụkpọ anụ ọla kọpa
Ihe ndozi nke ụlọ
Ejiri Íkwà Ígwè
Ejiri ígwè ígwè
Ígwè Mgbidi Ígwè
Ngwongwo Ejiri Ejiri Ejiri Ejiri Mee, Osisi na Ahịa Kasị Mma
Ndị ọrụ anyị jiri ngwá ọrụ na ụwa ochie dị mfe ihe eji eme ka ọla kọpa na-eme ka ọla kọpa mee, Crystal Chandeliers, Sinks Bathroom, Bowl Bowl, n'elu, ihe ndozi ígwè na ihe eji emepụta ihe ochie ochie nke ụlọ na ubi. Usoro ahụ yiri nke ndị Ijipt oge ochie bụ ndị dị elu na ihe owuwu ụlọ. Ka a sịkwa ihe mere ndagwurugwu Naịl bụ ebe obibi nke nwoke na-eme pyramid na sphinx nke dị n'etiti ụlọ ndị a ma ama n'akụkọ ihe mere eme.
A1 Egypt na-elekwasị anya na kpara ọla kọpa efere ụkwụ ụkwụ, kristal chandeliers, ime ụlọ ịwụ ahụ, ọla kọpa okpokoro n'elu, ebe e ji esi nri, ihe ndozi nke ígwè iji chọọ ahụ mmadụ, ụlọ na ubi mma. Tombs na-egosi na Fero ji Pọtịm maka ọgwụgwọ anụ na atụmatụ ọma.Nkọwa sitere na Latin okwu pedi cura pụtara ụkwụ na-elekọta.Ugbu a, ụmụ nwanyị na-ejikarị ụkwụ na gburugburu ụwa maka nlekọta anụ ahụ, ịhịa aka na ụkwụ na ọgwụgwọ.
Ngwongwo Ngwongwo Ngwácha, Ụlọ Sinks, Ụlọ
Ndị ọrụ Ijipt anyị bụ ndị ọkachamara ọla kọpa kasị mma na Mediterranean. A na-eji aka na-eme ụlọ na kichin kichin ọla kọpa, na-edozi ma na-edegharị dị ka Ugwu elu, n'okpuru ugwu ma ọ bụ arịa dabere n'elu n'elu ụlọ ma ọ bụ ihe eji eme ihe efu. Azucha ọla-edo anyị bụ nke mbụ, ọkụ ọkụ, nke na-egbuke egbuke, ihe ochie ochie, nickel plated na vintage verdigris.
Ngwongwo na-enwe mmetụta nke ukwuu maka ikpo ọkụ okpomọkụ, na-ekpo ọkụ n'oge ọbụla ma na-azọpụta ike. Ngwongwo ọla kọpa na-abịa n'èzí ma ọ bụ na-acha uhie uhie na-adabere na ụdị nri ahụ.
Onyinye ochie ọkpụkpụ kpakpando chandeliers
Ebe anyị na-achịkwa ihe ndị dị na French Empire Crystal basket Chandeliers collection nwere ọtụtụ puku obere bekee nke ga-egosipụta ụdị onye nwe ụlọ iji nweta aka kachasị mma nke na-eme ka ihe ọkụkụ dị na ụwa. Ihe eji eme ihe eji eme ihe ochie n'oge ochie nke France bu ihe omumaghi ebe obula.
Emere Ngwa Ngwa Ngwaahịa
Aka anyị mere akara na-adọta mkpali sitere n'aka ndị ahịa anyị, ndị na-ere ahịa oge ochie, ndị na-ere ahịa, ndị nwe ụlọ ahịa, ndị na-ese ihe, ndị ọrụ nkwekọrịta, ndị na-emepụta ime ụlọ, ndị na-ewu ụlọ, ndị na-ewu ụlọ na ndị nwe ụlọ. Anyị na-eji ọla kọpa, aluminom, ígwè ígwè, kristal na iko mee ihe iche iche. Ngwaahịa anyị nyere nchịkọta ihe dị iche iche iji nye ihe ndozi kacha mma.
Anyị na-enye aka ọrụ niile ngwaahịa ma na-ekesa kpọmkwem na ahịa anyị ahịa na n'ozuzu. Anyị nwere ike inye omenala nha, nhazi, textures, agwụ, logos na ọrụ site na arịrịọ.
Zitere anyị ozi-e ma anyị ga-alaghachikwute gị, wepụ.
© 2018 · a1egypt.com, ikike niile echekwabara